China Ink Remover BT-301/302 yoMvelisi kunye noMthengisi | BGT
BT-301/302 lulwelo lokususa nawuphi na umbala we-PP kunye nezinto ze-PE ngaphandle kobushushu obufunekayo.
Kungenxa ye-PP Ukunitha Ingubo yoshicilelo inki ukupheliswa.
BT-301/302lulwelo lokususa nawuphi na umbala we-PP kunye nezinto ze-PE ngaphandle kobushushu obufunekayo. Kwavavanywa ngokusekwe kwi-inki yokushicilela nakweyiphi na ibhegi yefilimu ekhaya nakumazwe aphesheya. Iyakwazi ukucoca ngokukhawuleza nangokufanelekileyo i-inki yokuprinta engaphezulu kunye nezinye izinto ezibangela ungcoliseko lokusingqongileyo kumphezulu wokuphinda usebenzise i-PP Ukunitha Ingxowa kwaye ubuyisele umbala ococekileyo nomhlophe wezinto.
Egqithileyo I-Masterbatch engabonakaliyo yeBT-805/820
Okulandelayo: Isincamathelisi sePET BT-336